Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Ụgbọ elu Alitalia: Emechiela maka azụmahịa
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Site na etiti abalị, Ọgọst 24, 2021, ụgbọ elu Alitalia agaghịzi ere tiketi maka ụgbọ elu na -amalite site na Ọktọba 15. Ụgbọ elu ahụ ga -ezigara ndị ahịa ya ozi ịntanetị zụrụ ụgbọ elu site na Ọktọba 15, 2021, na -aga n'ihu.
Kedu nhọrọ maka ndị ahịa a yana ihe na -eme tiketi ha nke ha kwụrụ ụgwọ maka ya?
A ga -enye ndị ahịa nhọrọ ka ha jiri ụgbọ elu Alitalia jikwaa ụgbọ elu (s) ha dochie ụgbọ elu (s) ha n'ọnwa Ọktoba 14, 2021.
Ọ ga -ekwe omume ndị ahịa ịnata nkwụghachi zuru ezu nke tiketi (s) ha.
Mgbe ha nwetasịrị akwụkwọ ikike ọrụ yana asambodo onye na -ahụ maka ụgbọ elu site na ENAC, Italian Civil Aviation Authority na Ọgọst 18, ụgbọ elu ITA (Italia Trasporto Aereo), nke a na -akpọbu Alitalia, a na-akwado ya maka ịpụ. ITA ga -emepe ahịa tiketi malite na Ọgọst 26.
Onyinye agbụ agbadoro maka akụ ụgbọ elu Alitalia
Kọmitii ITA, nke zutere n'okpuru onye isi oche nke Alfredo Altavilla, kpebiri ịgbanwe onyinye na-ejikọtaghị nke eziterela na Ọgọst 16 na nchịkwa pụrụ iche nke Alitalia ka ọ bụrụ nke na-adịgide adịgide. Onyinye a gụnyere ụgbọ elu iri ise na ise, ọnụọgụ oghere metụtara ya, yana nkwekọrịta na ihe enyemaka sitere na ngalaba ụgbọ elu iji malite ọrụ n'October 52.
Willnye ga -elekọta ọrụ ndị ahịa?
Onye ọrụ nke ụlọ ahịa ndị ahịa ọhụrụ ITA ga -abụ Covisian nke na -eji teknụzụ igwe ojii na mmekorita ya na ndị mmekọ dịka Salesforce na Amazon Web.
Na mgbakwunye, site na Ọgọst 26, saịtị maka nnakọta ngwa sitere n'aka ndị nwere mmasị iso ITA rụọ ọrụ ga -arụ ọrụ. Nke a ga -esochi nzukọ ọgbakọ ndị ọrụ ga -amalite mkparịta ụka na nkwekọrịta ọrụ ọhụrụ.
ITA iji nyochaa ndị ọrụ ugbu a maka ọrụ
ITA ga -amalite ọrụ ya na ndị ọrụ 2,800. Enwere ike ịgụ ya na nkwukọrịta ụlọ ọrụ ahụ zigara ndị ọrụ azụmaahịa n'ihi mmalite esemokwu ahụ. Ndị ọrụ “dị mkpa na mbido ọrụ” bụ “nha anya, dị ka atụmatụ azụmaahịa si dị, ndị ọrụ 2,800” kọwara ITA, onye na-ekwu na ọ “dị” ịhazi ndị ọrụ ”na-enyocha onye ọ bụla chọrọ maka ọrụ ewepụtara. site n'aka ndị ọrụ Alitalia Sai ugbu a. ”
Atụmatụ azụmaahịa na -enye na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike “mechaa mụbaa ndị ọrụ mbụ” ruo mgbe ha “ga -eru ọnụ ọgụgụ kacha elu nke ndị ọrụ 5,750 ka ọ na -erule 2025. Ka ọ dị ugbu a, ITA kwupụtara na a ga -arịọ ndị ọrụ niile ka ha nweta mgbochi COVID Green Pass.
Ịmata onye na -eweta ụgbọ elu dị mkpa
ITA kwughachiri mkpebi ya ime ka ụgbọ mmiri ya dị n'otu n'oge atụmatụ ụlọ ọrụ yana, ruo na nke a, ịmalite usoro mmeghari ụgbọ mmiri mbido ozugbo enwere ike, dochie ya na ọgbọ ọhụrụ nke ụgbọ elu dị mma na gburugburu ebe obibi. .
A ga -ewere mkpebi na nhazi nke ụgbọ mmiri ga -eme n'ọdịnihu wee kwupụta ya n'ọnwa Septemba. ITA na -ewepụtakwa usoro iguzosi ike n'ihe ọhụrụ "na -ebute ụzọ n'ịdị mma nke ọrụ enyere onye ahịa, nke nwere ike ijikọ ya na nke ndị mmekọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ" nyere na ụkpụrụ ndị Europe na -egbochi ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ inwe ike ịsọ mpi maka inweta Alitalia. Mmemme MilleMiglia.